I-TV: ingozi noma inzuzo?
Indlu yasekhaya I-Technique
Njengoba i-TV ingena empilweni yethu, kube khona impikiswano mayelana nokuthi ithonya layo liyingozi yini noma akukho lutho olungalungile lokuthi izigidi zabantu emhlabeni wonke zichitha amahora e-screen blue? Ochwepheshe bahlale befunda ithonya le-TV, bafinyelele iziphetho, baphikisane imibono yomunye nomunye. Omunye ukholelwa ukuthi i-TV ingaba usizo nakakhulu, othile uthi akukho lutho ngaphandle kokulimaza akuthwali. Ikakhulukazi iphikisana ngokuphathelene nomthelela we-TV ezinganeni. Ake sizame ukubona lokho ibhokisi lomlingo lenzani nathi.
Ukuqhubekela phambili ebudloveni.
Ungathukuthela ngokuthi kukhona ubudlova obuningi ezikrinini. Kodwa bekungeke kube, uma kwakungekho isidingo esikhulu samafilimu nezinhlelo ezithathwayo. Ucwaningo emhlabeni jikelele lubonise ukuthi ukuhlukunyezwa kokubukwa kwe-TV kwandisa ngempela amandla okudlwengula. Into yokuthi eziningi zezithombe esizibonayo esikrinini zibukeka ngempela. Izimo eziningi zenzeka noma zingenzeka empilweni yangempela. Siyaqonda ukuthi lokhu kuyisisusa kuphela, kodwa umzimba wethu ukholelwa, sesaba ukwesaba , intukuthelo, ukudabuka njengokungathi thina ngokwethu sihlanganyela esimweni esiyingozi. Eminyakeni edlule, sijwayele ukubuka ubudlova futhi singaboni, futhi lokhu kuyithinta kabi i-psyche.
Ithelevishini yanamuhla yakhiwe ngendlela yokuthi ubambe ukunakwa ekuseni futhi ungayivumeli kuze kube sekwephuzile ebusuku. Futhi ngisho nasebusuku kukhona okunye okumele sikubone. Uma uchitha kuma-TV kuphela amahora amathathu kuya kwangu-4 nsukuzonke, amakhilogremu angaphezulu ayothola. Umkhuba wokuphila ngokweqile, unikezwe isikhathi esichitha ehhovisi, awukho ukuvumelana, futhi ukungabi nokulala kubangela ukulala nokulala ngekhalori. Ngakho-ke, isithombe asiyona into engavamile lapho othile ehlaziya okuthile ngenkathi ebuka i-TV.
Njengoba sekushiwo kakade, ungathola uhlelo oluthakazelisayo noma ifilimu ku-TV kunoma yisiphi isikhathi sosuku. Ngezinye izikhathi abantu bahlabela iphupho ukuze babukele uchungechunge olulandelayo lwe-movie yabo abathandayo. Ngesikhathi esifanayo, okuqukethwe kwamafilimu kuthonya ukulala. Noma yiziphi izinto ezibangela ukuzwela okuqinile akubambi iqhaza lokulala ngokushesha nokulala okujulile. Abantu abaningi abachitha isikhathi kusihlwa esikrinini se-TV bakhononda ubunzima bokulala, ukulala noma ukulala. Ngezinye izikhathi lezi zimpawu zihlala zingapheli futhi zidinga ukungenelela kochwepheshe.
Akusiyo imfihlo ukuthi ithelevishini ayinandaba kakhulu nokuthi ababukeli bakhula ngokwengqondo noma ngokuziphatha. Leli bhokisi libonakala lisinikeza emaceleni imibono ekulungele, imicabango, izithombe. Lezi kuphela azizona imicabango zethu hhayi imizwa yethu, zifakwe ngendlela efanele, sijwayele ukucabanga nokuzizwa ngaleyo ndlela, futhi kungenjalo. Ngaphezu kwalokho, ithelevishini ithinta ikakhulukazi ingqondo yezingane ezikhulayo. Ukungahleli ohlezi esibukweni kunganciphisa ukuthuthukiswa kwefantasy, ubuciko, ukuphakamisa izinga lokukhathazeka. Ngaphezu kwalokho, izingane aziboni izibonelo ezinhle kakhulu zokulingisa, ukushaya ucingo lwazo oluthandayo.
Okokuqala, ungavuli i-TV "ngesizinda" kuphela. Okwesibili, khetha izinhlelo ngokucophelela. Uma ungafuni ukubona izigcawu zobudlova noma ukukhathazeka ngenxa yemicimbi ethile, ungabheke lawo mafilimu nezinhlelo ezingase ziphazamise ukuthula kwakho. Okwesithathu, qapha ukuthi izingane zakho zibukela nokuthi zichitha isikhathi esingakanani phambi kwe-TV. Kuze kube sesikhathini esithile, izingane azikwazi ukuchaza kahle ukuthi kwenzekani esikrinini, zidinga izincazelo zakho. Ngakho-ke, ungathathi i-TV njenge- nanny yamahhala futhi ushiye izingane zodwa ngebhokisi elikhuluma.
Khetha izinhlelo zokuthuthukisa nezomndeni zokubukela, ukhethe ngokucophelela amafilimu. Uma ingane ibukela i-TV ngehora noma amabili ngosuku, futhi isikhathi ngasinye sibonisa okuthile okusha nokuwusizo, ngeke kube khona ukulimala kuyo. Uma i-TV iba ukuzijabulisa kwakhe kuphela nomngane wakho omkhulu, maduzane uzobheka imiphumela emibi kusuka ekungcebelekeni okunjalo.
Uhlelo lwekhwalithi ye-grinder yenyama kagesi
Isikhumba sezingane: izinzuzo nezindleko ze-home laser epilator
Indlela yokukhetha i-laptop
Ukukhetha uhlobo lwemoto lomuntu wesifazane
Ungakhetha kanjani i-oven microwave ethembekile?
Amanzi ashisayo ebusika nasehlobo: ukushisa amanzi nokugcina amanzi
Iphunga ihamba nge sinamoni
I-carrot igwetshiwe nge-ginger
Ama-apinaphu enomnandi nama-dietary ayinamathinini
Inhlanhla encane: Indwangu yezingubo zentombazane enezandla zakhe
Iyini ukucindezeleka ekwindla
U-Alena Vodonaeva ushada futhi?
Amaphikisho for the best snacks
Isaladi kusuka ku-anyanisi
Amakhambi omphakathi ngokumelene nezikhwama ngaphansi kwamehlo
Ukukhulelwa emva kokwelashwa komkhuhlane wokukhulelwa komkhuhlane
Indlela yokukhetha umfundisi
Ingabe kuyingozi ukuhamba ngesikhathi sokukhulelwa?
Isitshalo se-Indoor Garnet
Ukuthandana namadoda angaphandle
Yini eyenza owesifazane ongewona ocansi
Ukupheka zokupheka izigwaca
Imfashini yezithombe ezenziwe imfashini ezivela kumafashi abakhiqizi
Indlela yokukhetha ikhamera yedijithali